None Archives - Saptakoshionline
इटहरी । आज माघ शुक्लपञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको विशेष पुजा अर्चना गरि मनाइने दिन यही अवसर पारेर सुनसरीको इटहरी १६मा रहेको जब्दी आधारभुत विद्यालयमा सरस्वतीको मुर्तीको अनावरण गरिएको छ । राजकुमारी माझीले आफना स्वर्गीय पति शुभलाल माझीको स्मृतिमा उपलव्ध गराएको मुर्ती रोटरी क्लव अफ इटहरीको आयोजनामा अनावरण गरिएको हो । सो अवसरमा मुर्तीदाता राजकुमारी माझीलाई रोटरी क्लव अफ इटहरीका तर्फबाट सम्मान गरिए...
इटहरी । इटहरीमा रहेको वसपार्क व्यवस्थापन समितिको दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले योग प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा ११ सदस्य नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । निर्वाचन अधिकृत दिपक ढकालका अनुसार एक सय ४४ जना सदस्य रहेको यस समितिको नयाँ समितिको उपाध्यक्षमा देवराज थापा, सचिवमा महेश कुमार घिमिरे र सह–सचिवमा तारा वन नियुक्त भएका छन् । यस्तै समितिको कोषध्यक्षमा रमेश न्यौपाने र सदस्यमा शम्शेर बह...
इटहरी । पूर्वमै पहिलो पटक एपमा आधारीत भई राइडसेरिङ् सेवा ‘मोटरगाडी’ सुरु हुन लागेको छ । ऐपले जनरल इन्सुरेनस कम्पनिसंग सामुहिक दुर्घटना वीमालेख समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । भिगोर ईन्कर्पोरेशन प्रा. ली. द्वारा सञ्चालित मोटरगाडी एप केही दिनमै सञ्चालनमा आउने तयारी गरिरहँदा दुर्घटना बीमालेखमा समझदारी गरिएको कम्पनिका कार्यकारी निर्देशकअजय गच्छदारले बताए । यात्रालाई सुरक्षित गर...
नायिका श्वेता खड्काले माझी बस्ती निर्माण र श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर रकम हिनामिना गरेको आफूमाथिको आरोपको खण्डन गरेकी छन् । उनले आज फेसबुकमार्फत ‘माझीबस्ती : यथार्थ र भ्रम’ शीर्षकको लेखबाट रकम हिनामिनाको आरोपको खण्डन गरेकी हुन् । उनले लेखेकी छन्, ‘मैले श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर विलासी जीवन बिताएको प्रतिकृयाहरु पनि देखेकोछु । तर जसले मलाई फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर...
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–३ का वडा सदस्य निरज चौधरीको घरमा उनकी प्रेमिका मृत अवस्थामा भेटिएकी छन् । चौधरीको घरमा २२ वर्षीया अञ्जिता चौधरी झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको कैलालीका एसपी अनुपम शमशेर जबराले अनलाइनखबरलाई बताए । चौधरीले आत्महत्या गरेको प्रहरीले आशंका गरेको छ । यद्यपि, पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै यकिन हुने प्रहरीले जनाएको छ । लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहे पनि चौधरीले अर्की ...
इटहरी\_ इटहरी जेसीजले मिस हस्पीटालिटि आयोजना गर्ने भएको छ । इटहरीमा सामाजिक काममा अग्राणी भूमिका खेल्दै आएको जेसिजले मिस हस्पिटालिटी २०२१ आयोजना गर्ने आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जानकारी दिएको छ । इटहरी जेसिजको इतिहाँसमा पहिलो पटक प्रदेश १ का १६ देखि २३ वर्ष उमेर समुहका युवतीहरुलाई सहभागीहरुलाई लक्षित प्रतियोगित आयोजना गर्न लागिएको इटहरी जेसीजले जानकारी दिएको छ । युवाहरुमा लूकेर रहेको प्रतिभाव, ...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले आइतबार र अर्का अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले सोमबार पेस गरेको निवेदन मंगलबार दर्ता भएको हो । प्रधानमन्...
कोरोना संक्रमणबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकृतको मृत्यु भएको छ। ललितपुरस्थित गोदावरी का ५१ वर्षीय कम्प्युटर अधिकृत श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको कोरोना संक्रमणको कारण सोमबार मृत्यु भएको स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको वीर अस्पतालमा उपचार हुँदै आएको थियो।
६ लाख पाउने लोभमा सामूहिक बलात्कारमा परेँ भनेर झुटो जाहेरी दिने युवती पक्राउ परेकी छिन । २८ पुसमा ओखलढुंगा घर बताउने अन्दाजी १७ वर्षीया युवतीले आफूलाई २५ पुसमा ५ जनाले चन्द्रनिगाहपुरको २ तल्ले पक्की घरमा बन्धक बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै ईलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा जाहेरी दिएकी थिइन् । युवतीले ओखलढुंगाबाट काठमाडौं जाने क्रममा खुर्कोटमा गाडी बिग्रिएपछि बाटोमा बसिरहेको...
निम्न आर्थिक स्तर भएका परिवारका छोराछोरी कुलतमा फस्दा परिवारले रिहाब सेन्टरमा राखेर उपचार गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उपचार गराइदिने हेतुका साथ इटहरीमा हेल्पिङ हेल्पिङ हेन्ड क्लबको स्थापना भएको छ । शुक्रवार इटहरी उपमहानगरपालिका ५ हलगडामा एक कार्यक्रम गरी क्लबको विधिवत् स्थापना गरिएको हो । क्लबको अध्यक्ष राजेश राई नियुक्त भएका छन् । उनले आफू कुलतमा फसेर रिहाब सेन्टर बस्दा ...